အမျိုးအစား: နောက်ပြီး, ခြေသည်းအ
CND Shellac နှင့် OPI Gel အရောင်အကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိပါသလား? ငါအရင်အဖြေဖို့စာရင်းသွင်း။ ဖော်မြူလာအပြစ်တွေအလွန်ကောင်းသောဂျယ်ယွန်းဆေးယွန်း CND ဖြစ်ကြောင်း, ကရှည်လျားပေါရာဏဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့ ...
ဖောက်သည်များအစပြုသူ Manicurist ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဘယ်လို, prompt? ငါသည်အသက်ဥပမာကျေးဇူးတင်ဖြစ်သင့်သည်။ ကိုယ်ပိုင်ဥပမာ။ ပထမနှစ်တွင်ပြီးနောက်, သင်တို့ကိုငါတွေ့မြင်နိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုအတူအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုနှိုင်းယှဉ် ...
maniaur အတွက်အစက်သို့မဟုတ်အစက်ဆိုသည်မှာအစက် - လက်သည်းဒီဇိုင်းအတွက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အသုံးပြု၍ အမျိုးမျိုးသောအချင်း၏အမှတ်များကိုဆွဲသည်။ အစက်များ၏ထိတွေ့မှုတစ်ခုစီသည် ...
အဆိုပါလက်သည်းအဖြစ် extension ကို၏ဖယ်ရှားရေး? cabin ထဲမှာအသိုက်ဆုံးနဲ့ဖြတ်သို့မဟုတ်သင် Spila မှေးညှပျမြားနှငျ့လက်သည်းကတ်ကြေး ယူ. ပေါ်တွင်အတုလက်သည်းဖြတ်ရှိရာအလှပြင်ဆိုင်, သွားယူ ...
ဆီမီးဂျယ်လက်သည်းထဲမှာခန်းခြောက်ဖို့ဘယ်လိုမိန်းကလေးများ ???? အဆိုပါ310 ကနေမိနစ်ငှါ, ခရမ်းလွန်ဆီမီးခွက်နဲ့2့အတွက် 30 မိနစ်လက်သည်းပေါ်တွင်ရေတွက်ဘယ်လောက်များများဆေးသုတ်ကပေါ် မူတည်. ...
အဆိုပါအဓမ္မအနံ့ဖြတ်တောက်သည့်အခါအဘယ်ကြောင့်ငါနေ့တိုင်းငါ့အခြေထောက်များရှိသော်လည်း, toenails? သူတို့ကြီးထွားသောအရာကိုရာအရပျ၏တစ်ဦးကအသိပေးစာလက်သည်းမဟုတ်အနံ့နှင့်သောအောက်တွင်စုပုံ ...
biogel သို့မဟုတ် acrylic နှင့်အတူအားကောင်း? ဇီဝလောင်စာကိုပိုမိုအားဖြည့်ပေးတာကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ အကယ်၍ ပထမဆုံးမာစတာတွင်ဇီဝပြproblemsနာရှိနေလျှင်၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။
သူလက်သည်းပေါ်တွင်အနက်ရောင်အစက်အပြောက်ပေါ်လာခဲ့ရာမှသိသနည်း အဆိုပါလက်သည်းတွင်? ဒါမှမဟုတ်လက်သည်းအောက်မှာ? အောက်မှာပါလျှင်ဤဗီတာမင် chasnoti အတွက်အလုံအလောက်ကယ်လစီယမ်, အားနည်းလက်သည်းမရှိကြောင်းအကြံပြု ...
လက်သည်းပန်းကန်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လို? တစ်သုညဖြတ်မထားဘူး, mikronihiya တစ်ဦးစီရှိပါတယ်။ အခမဲ့အစွန်းအမြဲငါတို့မရှိ, ပိုကောင်းပိုရှည်ဓာတ်ပုံသောအရာကို Wow ထက်ရှိနေဆဲနှင့်ရမယ် ...
ကျွန်မအိမ်မှာနေတဲ့နောက်ပြီးလုပ်ပေးချင်တယ်။ ဘယ်မှာ clients များရရှိရန်ရှိရာ, စတင်ရန်? Koshka Umnaja အတော်လေးညာဘက်ဒါပေမယ့်ကျွန်မနောက်ပြီးလုပ်ပေးချင်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှ, မိတ်ဆွေများအကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲလုပ်ပါကမမျှော်လင့်ဘဲ) = ချက်ချင်းချိုးဖဲ့! အတူ ...
Shellac သို့မဟုတ် shellac ဂျယ်အရောင်ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ်ဦးဂျယ်လက်သည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လျှောက်လွှာနည်းလမ်း (ကျနော် Pre-ပုံစံတင်ပို့ရန်အကြောင်းပြောနေတာပေါ့), ခုခံ, အရောင်များနှင့် (shellac အလွန်လွယ်ကူစွာဖယ်ရှားနေသည်ဖယ်ရှားခြင်းအတွက်ကွာခြားခြင်းနှင့် ...
အိမ်မှာသကဲ့သို့သငျအခြို့သောလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်အရေပြားပျော့နှင့်ပျော့ပျောင်း, ကိုယ်လက်သင်၏လက်အဘို့အပြုစု, အိမ်မှာခက်ခဲသည်မဟုတ်စေ။ အသားအရေစောင့်ရှောက်မှုလက်များအတွက်အနည်းငယ်အကြံပေးချက်များ ...
မိမိအလက်သည်းကိုက်တတ်သောသူတို့အဘို့အထူးလက်သည်းဆိုးဆေး၏နာမကို ... can`t ကလေးကနို့
ငါနောက်ပြီးအောင် HIV ပိုးကူးစက်ရနိုင်မလား? AIDS ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကအရမ်းမတည်မငြိမ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်ပါတယ် ... ထို့နောက်၎င်းတို့သည်ဗိုင်းရပ်စ်ဆဲလ်တစ်အချို့နံပါတ်မလိုအပ် HIV ပိုးကူးစက်ဖြစ်လာဤ kollichestve ရှိကြ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး ...
လက်သည်းများကွဲခြင်း၊ ဘာလုပ်ရမလဲ နေ့တိုင်းလက်သည်းများကိုအရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းဖြင့် (ဆေးဆိုင်များတွင်ရောင်းချသည်) ။ လက်သည်းများသည် ကြာရှည်၍ အားကောင်းလာလိမ့်မည်။ ဗာဒံသီး - လက်သည်းအတွက်အသုံးဝင်သော အကြံပြုထားသည် ...
ခရမ်းလွန်မီးချောင်းများသည်အန္တရာယ်ရှိသလား။ ရယ်စရာအဖြေများ! အထူးသဖြင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အလင်းဖြင့်ပိုးသန့်ဆေးထားသောဆေးရုံများအကြောင်း - ယေဘုယျအားဖြင့်မီး !! ! ခရမ်းလွန်လက်သည်းခြေသည်းများအန္တရာယ်ကင်းသည်။ ၎င်းတို့အတွင်းရှိဓါတ်ရောင်ခြည်ရောင်စဉ်သည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။
အဆိုပါနောက်ပြီးနောက်ပြီးအကြောင်းကိုအတန်းဆရာမများ၏မွေးနေ့ရန်ကျမ်းပိုဒ်ကိုရှာဖွေငါ့ကိုကူညီပါ! Klassruku နေ့က rozhdenyaProchitaem ဂုဏ်ယူပါတယ်! ငါတို့သည်သင်တို့ရှိသမျှကိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှကောင်းသောကံဆန္ဒရှိ! လူအပေါင်းတို့သည်သင်တို့ကိုမြင့်မား, ကိုထိခိုက်ဘယ်တော့မှ, သိတယ်, ဒါကြောင့်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ခစျြ၏ ...
သင်လက်သည်းဖို့လျှောက်ထားသည့်အခါမီးခွက်နှင့်မည်မျှအချိန်ဇီဝလိမ်းဆေးထဲမှာခန်းခြောက်ဖို့ primer လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပြောပါ? 1) Prayier ခြောက်သွေ့ 2) ဇီဝဆေးအများအားဖြင့် pre-Prime မလိုအပ်ပါဘူး, မလိုအပ်ပါဘူး ...
လက်ချောင်းအပေါ် burrs ဖယ်ရှားပစ်ရဘယ်လိုနေသလဲ? ။ သေးငယ်တဲ့ပန်းကန်ထဲမှာ, မိမိလက်၌အသံလွင်ရေနံနှင့်အောက်ပိုင်းအပူ။ ရေနံကဆင်းအအေးအထိကိုင်ထားပါ။ အဆိုပါရေနံထွက်ယို Allow ဝါဂွမ်းလက်အိတ်ပေါ်တွင်တင်နှင့် ...
primer သို့မဟုတ် bonder? ဂျယ်လ်လက်သည်းများအတွက် primer နှင့် bonder ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဤအရာနှစ်ခုသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသလား။ အကယ်၍ Primer သည်အာဖရိကတွင်ရှိလျှင်၎င်း primer သည်အက်ဆစ်တစ်ခုဖြစ်သည် ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,297 စက္ကန့်ကျော် Generate ။